पदाधिकारी मनोनीत गर्ने तयारीमा देउवा, क–कसलाई रोजे देउवाले ?| Nepal Pati
पदाधिकारी मनोनीत, क–कसलाई रोजे देउवाले ?
काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनीत गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, खड्का र विश्वकर्माको नाममा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति बनाउने सवालमा भने धेरै विमति नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसो त नातेदारसमेत रहेका कार्कीलाई महामन्त्री बनाउने आश्वासन देउवाले सभापतिमा निर्वाचित भएदेखि नै दिँदै आएका थिए । तर, सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्थमन्त्री बनेका कार्कीले सहयोग नगरेको भन्दै देउवा रुष्ट छन् । कार्कीले श्रीमती डा. आरजु राणा देउवाले भनेको काम गरेको, तर आफूले भनेको नटेरेको उनको निष्कर्ष छ । हालै दुवै नेताले देउवालाई भेटेर पदाधिकारीमा नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको बूढानीलकण्ठ स्रोतले बतायो ।